vendredi, 19 juillet 2019 21:46
Hafa kely: Nivoaka ny efitrano izy hiteraka, niverina afaka ora iray nanohy ny fanadinana
Tany amin’ny lisea iray, 250 km atsinanan’i Conakry, renivohitr’i Guinée no niseho ity tranga hafakely ity ny talata teo. Tovovavy gineana iray, 18 taona, no nihetsi-jaza tampoka teo ampiatrehana ny taranja fizika hahazoana diplaoma bakalôrea. Nivoaka efitrano tokoa izy, ary teraka lahikely. Ora iray taorian’ny niterahany, niverina tao anaty efitranon-tsekoly ilay reny tanora nanohy ny fanadinany.
vendredi, 19 juillet 2019 21:42
Kitra – CAN 2019: Miandrandra amboara voalohany ny Senegaley
Tanterahina anio alina ao amin’ny « Stade international du Caire », Egypta, izay mahazaka mpijery 75 000, ny lalao famaranana iadiana ny Amboaran’i Afrika amin’ny baolina kitra. Hifandona amin’izany famaranana izany i Alzeria sy Sénégal.
Tsy mbola nahazo ity amboara ity ny Senegaley. Efa nahazo ny Amboara kosa ny Alzeriana tamin’ny taona 1990.
Manatombo ara-taratasy ny Senegaley. Faha-22 manerantany amin’ny fandaharana navoakan’ny FIFA tamin’ny jona 2019, ary Voalohany aty Afrika i Sénégal raha toa ka faha-68 manerantany ny Alzeriana.
Ny baolina anefa boribory, ary 90 minitra ny faharetan’ny lalao ara-dalàna, aorian’izay no hamantarana izay handrombaka ny Amboara an’i Afrika amin’ny baolina kitra andiany faha-32 ity.
vendredi, 19 juillet 2019 21:40
Praiminisitra: Ny teo ihany no eo
Notendrena ho Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta Andriamatoa Ntsay Christian, araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha 54n’ny Lalampanorenana, ary nohamafisina tamin’ny didim-panjakana laharana faha-2019-1407 tamin’ny 19 jolay 2019, novakian’ny Sekretera jeneraly lefitry ny Fiadidiana ny Repoblika, Andriamaholy Dina teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha androany tolakandro.